Safarkii Hussein Samatar ee Sweden | Somaliska
Agaasimaha Xarunta Horumarinta Africa (African Development Center) ee Minnesota, USA Hussein Samatar ayaa booqasho ku yimid Sweden bishii la soo dhaafay isagoo kulamo la qaatay qeybaha kala duwan ee Soomaalida ku dhaqan Sweden, ganacsatada iyo madaxda Dowlada.
Mr Samatar ayaa mowduucyo dheer ka qoray kulamadii uu la yeeshay Soomaalida iyo dowlada Sweden isagoo booqasho ku tagay magaalooyin ay ka mid yihiin Halmstad, Göteborg, Stockholm, Eskilstuna iyo Karlskrona. Mar uu ka hadlaayay ka qeyb galkii shir ku saabsanaa isdhexgalka oo ka dhacay magaaalada Halmstad ayuu Mr Samatar sheegay in waxa loogu yeero isdhexgalka uusan qeex neyn oo soo galootigu ay ku jahwareersanyihiin waxa loola jeedo in bulshada Sweden la dhex galo.
Waxa uu kulankaas oo ay ka soo qeyb galeen madax kala duwan oo uu ku jiro wasiirka Socdaalka, ka jeediyay qudbad ku saabsan horumarka ay xaga ganacsiga ka sameeyeen Soomaalida ku dhaqan Minnesota, USA. Lugtii labaad ee safarkiisa ayuu Mr Samatar ku tagay magaalada Göteborg isagoo kula kulmay halkaas maamulka kamuunka iyo Soomaalida halkaas ku dhaqan. Dadka uu la kulmay ayaa waxaa ka mid ahaa koox Soomaali ah oo Göteborg ka qabanqaabinaya suuq ay Soomaalidu yeelato.
Qabyaalada ayuu sheegay in ay dhibaato ku tahay Soomaalida sweden qaasatan reer Göteborg isagoo intaas ku daray in dadkii uu la kulmay ay cabasho badan ka muujinayeen kala qeybsanaanta iyo hogaan la’aanta haysata Soomaalida ku dhaqan Sweden. Waxa uu intaas ku daray in loo sheegay in maamulka Swedishka qaarkood ay ka faaideystaan kala qeyb sanaanta Soomaalida oo ay ka hor istaagaan in ay hogaan wanaagsan yeeshaan.
Hussein Samatar ayaa safarkiisii Sweden ku booqday dhowr magaalo isagoo goob kasta kula kulmay Soomaalida ku dhaqan isla markaana kala hadlay sidii ay horumar uga sameyn lahaayeen arimaha shaqada iyo ganacsiga. Haydiisa ADC ayaa Soomaalida Minnesota waxay ka caawisaa sidii ay xaga ganacsiga iyo maalgashiga horumar uga gaari lahaayeen.
Mr Samatar ayaa sheegay in kulamadii uu la qaatay Soomaalida uu ka dhadhansaday in Soomaalida ay cabasho weyn ka qabaan sida loo arko, iyagoo la aaminsanyahay in ay yihiin dad mashaqeystayaal ah. Balse waxa uu sheegay in kulamadii uu la yeeshay madaxda Sweden uu ku celceliyay in Soomaalidu ay yihiin dad daacad ah oo shaqo diyaar u ah.
Magaalada Stockholm ayuu kula kulmay madax uu ku jiro wasiirka isdhexgalka Erik Ullenhag iyo madax ka socotay degmooyinka qaar sida Gudoomiyaha magaalada Fagersta iyagoo ka wada hadlay sidii loogu abuuri lahaa fursado ganacsi iyo shaqo Soomaalida . Mr Samatar ayaa sheegay in uu la yaabay in madaxda Sweden ay doonayaan in Soomaalidu ay shaqeeyaan balse aysan hayn macluumaad ku saabsan Soomaalida iyo inta shaqo la’aanta ah ama shaqeysa. Waxa uu sheegay in markii laga hadlayo arimaha Soomaalida ay muhiimtahay in Soomaalida laga qeyb galiyo wadahadalka balse aan iyagoo maqan aan laga sheekeysan.
Isku soo wada duuboo booqashadii Hussein Samatar ayaa u muuqata in ay indhaha u furtay maamulka dowlada Sweden iyo sidii ay Soomaalida ula shaqeyn lahaayeen. Waana tusaale fiican in Soomaalida horumarka sameysay ay u soo gurmadaan walaalahooda aan hore u kicin sida inta badan Soomaalida ku nool Sweden.
Moderatka: Hala xiro xuduudaha wadanka, dadkana degdeg ha loo musaafuriyo
June 10, 2011 at 12:18
asc wallaal jimcaale aad ayaan kuu salaamayaa salaan ka dib wallaal waxan ubaahnaanlahay meesha aan u mari lahaa ama cid aad heyso telkeeda oo ka mid ah dowlada si aan ugala xiriiro waan dareemi karaa culeyska keligaa aad iska sartey arimaha isukeenitaanka familada waayo soomaali wey hurudaa waxaana ugu daran kuwa ay ka maqan yihiin familkooda waayo ma muuqdo wax dadaal ah ay hada qorsheynayaan ama ha ahaato mudaaharaad aan laga daaalin had iyo goor waayo hadaan sidaa la sameynin cid kuu naxeyso maleh waxaan soo jeedin lahaay in hurdada laga kaco oo laga midoobo si wadajir loogu dhaqaaqo talaabo walbo oo caqli gal ah waxan idiinka raali gelinayaa arinta ma aheyn fikrada aan halkan uga soo jeediyey balse qofba wax baa u daran waayo ganacsi iyo soomalida soo gashey labaatanka sano ka hor waa kuwa noo horseedey wadada aan hada ku jirno sidaa daraadeed ma iquseyso arin gnacsi iyo isdhexgal halkaan waxan ka aqristaa arimaha socdaalka hana leyga raali ahaado hadii uu qalad iga dhacey waayo ma gafe waa alle subxaanahu watacaalaa mahadsanidiin
June 12, 2011 at 12:03
qof maskaxdiisu joogto ayaa ganacsi iyo horumar ka hadla ee ruux reerkiisii iyo caruurtiisii loo diiday miyaa taas xooga u hela wax walba waxaa ka muhiimsan caruuraha kala maqan sidii loo keeni lahaa ha laga tashtso soomaali wayneey mida kale samatar in loo sheego ayay aheed soomaalida waxay wax la qabsan la,yihiin waxaa ka mid ah arintaan kala xayiritaanka ah oo way wada walaacsanyihiiin mahadsanidiin